मन्त्रीको राजीनामाले मात्रै पर्याप्त हुँदैन - Enavanari
मन्त्रीको राजीनामाले मात्रै पर्याप्त हुँदैन
महिला हिंसालाई कसरी न्यूनिकरण गर्ने भन्ने बारेमा नेपालमा मात्रै होइन अन्तराष्ट्रिय रुपमा नै बहस चलिरहेको समयमा देशको सम्माननीय पदमा बसेका मन्त्रीले नै दिएको अभिव्याक्ति अहिले महिला अधिकारवादी र समग्र नेपालीहरुको लागि बिझाउने बनेको छ । उनको अभिव्याक्तिले कति अभिभावकहरुको चिन्ता बढाइदिएको छ, कतिलाई पश्चताप भएको छ आफ्ना छोरीबुहारीहरुलाई बंगलादेश डा. पढ्न पठाएकोमा भने राम्रो पढाईभएका आफ्ना सन्तानको डा. बनेर बिरामीको सेवा गर्ने चाहनालाई साथ दिदै लाखौ ऋण गरेर पढ्न पठाएका अभिभावकलार्ई के वित्यो होला यो कुरा न त दुर्गा प्रसाईले अनुमान लगाउन सक्छन् नत शेरबहादुरले नै । यदि उनीहरुका छोरीहरु बंगलादेशमा डा. पढ्दैथिए भने यो कुरा बोल्ने थिएनन् बरु गर्वका साथ भन्ने थिए मेरो छोरीले बंगलादेशमा डा. पढ्दैछ या पढिसकी । समग्र नेपालका महिला डा. जो अहिले आफ्नो पढाई बंगलादेशबाट सकाएर दिन रात नभनी सेवा गरिरहेका छन् उनीहरुको अपमान हो यो । समग्र बिधार्थीको अपमान हो अझ भनौ समग्र महिला माथिको अपमान हो । महिला डा. हरुको अस्मिता माथी धावा बेलेका छन् उनले जसका लागि उनको राजीनामा मात्र प्रर्याप्त हुँदैन कानून बमोजिम कडा कारवाहि हुनुपर्छ । अहिले कतिपयले राम्रो मान्छे हुन् शेरबहादुर भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पोखिहेका छन् । हुनसक्छ उनी राम्रै थिए र नचाहेरै गल्ती भयो तर गल्ती आखिर गल्ती नै हो त्यो राम्रो मान्छेले गरोस् या नराम्रोले, चाहेर गरोस् या नचाहेर उसको त्यहि एउटा गल्तीका कारण हजारौलाई चाट पुगेको छ । पदमा बसेपछि के बोल्न हुन्छ के बोल्न हुँदैन यी कुराहरु ध्यान दिन जरुरी छ । उनी बोल्नु भनेको सरकार बोल्नु हो, त्यसमा पनि उनी त कानून मन्त्री उनी आफैलाई पनि धेरै थहाँ हुनुपर्ने कस्ता शब्द प्रयोग गर्नहुन्छ कस्ता प्रयोग गर्न हुँदैन भन्ने ।
सतहमा बसेर कसैको कुरा सुनेको भरमा बिना प्रमाण कसैको अस्मिता माथी प्रश्न चिन्ह लगाउने खालका शब्द बोल्नुको परिणाम कानून बमोजिम उनले भोग्नु पर्छ । मन्त्री बनेर पदमा बसिरहने उनको अवसर त गुम्यो नै तर त्यो भन्दा ठूलो चोट महिला डा.लाई परेको छ उनको अभिव्याक्तिका कारण । नेपालमा मेडिकल कलेजलाई मान्यता दिन हुदैन भन्दै डा. केसी अनशन बसिरहदा अहिले देशका अधिकांश जनता उनको पक्षमा छन् । केसीको तरिका ठिक नभएपनि उनका धेरै मागहरु भने जायज छन् जुन जनताले बुझेका छन् । यदि केसीको माग पुरा भयो भने थुप्रै नेपाली बिधार्थीहरुले सहज तरिकाले आफ्नो देशमा नै डा. पढ्न पाउने छन् । खर्चको अभावले डा. हुनबाट बञ्चित हुनुपर्ने छैन । त्यसैले पनि उनले साथ पाएका हुन् । त्यहि साथ देखेर डराएका केहि दुर्गा प्रसाइले बंगलादेशमा छात्राहरुलाई करणी गरेर मात्रै सर्टिफिकेट दिने कुरा गरेर त्रसाउन खोजे, उनको सपोर्टमा कानूनमन्त्रीले आपतिजनक अविव्याक्ति दिन पुगें र उनी पदच्यूत भए तर यहि घटनालाई अहिले जातियतासँग जोडेर विवादित बनाइदैछ । तर यो जातिय कुरा होइन गल्ती गर्ने चाहे जो कोहि होस् उसले सजाय पाउनुपर्छ विगतमा गोपाल पराजुली र अहिलेको शेरबहादुर दुबैले महिला हिंसा गरेका हुन् र राजीनामा दिन बाध्य पारिएको हो पनि । संबेदनशिल बिषयमाथी प्रहार गर्दा भोगेको सानो सजाय हो जुन पर्याप्त छदै छैन । हिंसाका थुप्रै रुप हुन्छन् महिला हिंसाको यो पनि एउटा रुप हो । उनको भनाईले डा. पढ्ने महिलाको अस्मिता माथी नै प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ । हिजो सम्म खुशि साथ डा. पढाउने अभिभावक अहिले डराएका छन् । केहि समय अगाडि राष्ट्रपतिको बारेमा नकरात्मक बोल्ने एकव्याक्तिलाई सरकारले कारवाहि गर्यो, जेलमा नै हाल्यो जुन सहि पनि हो तर अहिले सम्पूर्ण डा. महिलामाथि यस्तो आपत्तिजनक शब्द प्रयोग गर्ने दुर्गा प्रसाई र उसैको कुरालाई सपोर्ट गर्दै बोल्ने सरकारको मन्त्रीलाई के अब सरकारले कडा कारवाहि गर्ला त ? यदि कानून जनतालाई लाग्छ भने मन्त्री र मेडिकल माफियाका रुपमा प्रख्यात दुर्गा प्रसाई कानून भन्दा माथी रहेर कारवाहि नहुने हो त ? पक्कै पनि देशमा कानून भन्दा माथी कोहि छैन ।
गल्ती समान्य जनताले गरोस् या पदमा बसेको मान्छेले कारवाहिको भागिदार दुबै हुनुपर्छ । शेरबहादुरको कुरा केहि साँचो पनि होला तर यदि त्यस्तो हो भने सत्य तथ्य बुझेर समाधानको बाटो अपनाउनु पर्दथ्यो । सरकारले चाहेको खण्डमा ती कलेजहरुलाई नै कारवाहि गराउने क्षमता राख्छ जहाँ नेपाली चेलीहरु शोषित भइरहेका छन् । यौन शोषणलाई कुनै पनि देशको कानूनले मान्यता दिएको छैन र दिदैन पनि । किन यसको लागि कुनै पहल गरेनन् कानून मनत्रीले ? प्रसाई र तामाड् दुबै केपी ओली सरकारको दुर्भाग्य पनि हो । अहिले गोविन्द केसीको अनशन र जनतालाई अचाक्ली कर लगाएर बिरोध खेपीरहको बेलामा यी अभिव्याक्ति र सरकारले यस्ता मन्त्रीमाथी कुनैपनि कारवाहिको ठोस निर्णय गर्न सकेन भने ओली सरकार कम्जोर ठहरीने छ । अहिले सरकारलाई कम्जोर बनाउने प्रयास प्रतिपक्षबाट भइरहेको समयमा आफ्नै मन्त्रीको अभिव्याक्तिले समग्र पार्र्टीलाई नै नकारात्मक बनाइदिएको छ । जनताले आशा गरेको सरकारका मन्त्रीलाई दिनप्रतिदिन निराशा बनाइरहेका छन् । महिलाको अस्मितामाथी औला ठड्याउने मन्त्रीलाई जबसम्म कडा कारवाहि गरिदैन यो सरकार वास्तवमा नै गलत र अपराधिलाई संरक्षण गर्ने सरकार सावित हुनेछ जनताको नजरमा । राजीनामा दिन लगाउनु सरकारको राम्रो कदम हो तर यो राजीनामाले मात्रै समग्र डा. महिलाहरुको चोटमा मल्हम लगाउन सक्दैन । अर्कोकुरा कानून मन्त्री मात्रै होइन दुर्गा प्रसाईले पनि कारवाहि भोग्नु पर्छ ताकि आउने समयमा कसैको अस्मितामाथी औला ठ्ड्याउने दुस्साहस नहोेस् ।